Shabaabul Mujaahidiin Oo Siinka Dheer Ku Weeraray Ciidamada Dowladda. – Bogga Calamada.com
Shabaabul Mujaahidiin Oo Siinka Dheer Ku Weeraray Ciidamada Dowladda.
Iska hor’imaad hubeysan oo u dhaxeeyay ciidamada jamhadda Mujaahidiinta ee wilaayada Sh/hoose iyo maleeshiyaadka dowladda federaalka ah waxa uu ka dhacay deegaanka Siinka dheer ee dhaca duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Weerarka oo ahaa mid si heer sare ah loo agaasimay waxay ciidamada shabaabul Mujaahidiin si gaar ah ugu beegsaeen saldhigga ciidamada dowaldda ay ka samaysteen deegaanka Siinka dheer oo ka mid ah deegaannada wilaayada Sh/hoose ee kaabiga ku haya magaalada Muqdisho.
Ilo wareedyo waxay soo wariyeen in saldhigga deegaanka uu ka dhacay dagaal aad u xooggan oo u dhaxeeyay labada dhinac. goobjoogeyaal waxay soo sheegeen inay maqlayeen hugunka rassaasta iyo deryanka madaafiicda la is dhaafsanayay dagaalka.
Macluumaadkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dagaalkaas ay ku gacan sarreeyeen ciidamada Mujaahidiinta . khasaare kala duwanna lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda waxayna iluhu intaas ku darayaan in ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay si nabdoon kaga soo laabteen deegaanka ka dib markii ay gaareen hadafka duullaankooda.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa sare usii kacay howlgallada jihaadiga ah ee ciidamada shabaabul Mujaahidiin ku beegsanayaan saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Shisheeyaha ay kaga suganyihiin Sh/hoose.